အောက်ချင်းအေဂျင်စီ - ဖုန်းခွန် ငါးရာခိုင်နှုန်းနဲ့ NLD အခက် ယုတ်သူ အချက်လေလား ? - The Hornbill News Agency
ဖုန်းခွန် ငါးရာခိုင်နှုန်းနဲ့ NLD အခက် ယုတ်သူ အချက်လေလား ?
aung7 1:09 PM No comments:
“၂၀၁၆ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့မှစ၍ ပြည်ထောင်စုအခွန်ဥပဒေအရ မိုဘိုင်းဖုန်း သုံးစွဲသည့်အခါ ကျသင့်ငွေများအားလုံးအတွက် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅ % ပေးဆောင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်” တဲ့။ လာပြန်ပြီဟေ့လို့ပဲ ပြောရတော့မယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁ ရက်က အသစ်ပြင်ဆင်ပြဋ္ဌာန်းတဲ့ ၂၀၁၅/၂၀၁၆ ပြည်ထောင်စု အခွန်ဥပဒေသစ်အရ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁ ရက်မှာ ဖုန်းသုံးစွဲသူတွေက ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅ ရာခိုင်နှုန်း ကောက်ဖို့ လုပ်ခဲ့သေးတယ် မဟုတ်ပါလား။
အခွန်ကောက်ခံရတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးသန်းထွန်းအောင်က “ကုန်သွယ်ခွန် Commercial Tax ဆိုတာကတော့ နိုင်ငံတော်အတွက် လိုအပ်တဲ့ ဘဏ္ဍာငွေတွေ ရရှိဖို့အတွက် နိုင်ငံတကာ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းတွေနဲ့အညီ ကောက်ခံတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကရရှိတဲ့ ဘဏ္ဍာငွေတွေကို နိုင်ငံတော်ရဲ့ လိုအပ်တဲ့ ကဏ္ဍတွေဖြစ်တဲ့ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ ပြန်လည်အသုံးပြုပြီး ပြည်သူ့ အကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေကို လုပ်နိုင်ဖို့အတွက် အသုံးပြုရတာ ဖြစ်ပါတယ်”လို့ ၂၀၁၅ မေလ ၁၈ ရက်မှာ လုပ်တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောခဲ့ပါတယ်။
ကုန်သွယ်ခွန်အနေနဲ့ ဖုန်းသုံးစွဲသူတွေက ၁၀၀၀ ကျပ်ဆိုရင် ၄၈ ကျပ်၊ ကျပ် ၅၀၀၀ ဆိုရင် ၂၃၈ ကျပ်၊ ကျပ် ၁၀၀၀၀ တန်ဆိုရင် ၄၇၆ ကျပ်ကို နိုင်ငံတော်အတွက် အခွန်ပေးဆောင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ငါးရာခိုင်နှုန်း ကောက်မယ့်ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ သတင်းမီဒီယာတွေက နယ်ပယ်ပေါင်းစုံက လူတွေနဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်း သတင်းတွေ ဖော်ပြကြနဲ့ ပွတ်လောရိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ အဲဒီနောက် အခွန်ကို ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘက်ဂျက်ကာအတွင်းမှာ ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးဖို့ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီက အမရပူရအမတ် ဦးသိန်းထွန်းဦးက လွှတ်တော်မှာ အရေးကြီးအဆိုတင်တဲ့အခါ ဒါကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်က “မိုဘိုင်းဖုန်း ကြိုတင်ငွေဖြည့်မှုများမှ အခွန် ၅ % ကောက်ခံမည့်ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ပြည်သူအများစုတွင် အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြောင်း သိရှိရသည့်အတွက် ပြည်သူတို့၏ ဆန္ဒနှင့်အညီ ဖြစ်စေရန် လွှတ်တော်ဘက်မှ ဆောင်ရွက်နိုင်သည်များကို ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ ဆောင်ရွက်မှုကြောင့် အခွန် ၅% ကောက်ခံမှုအား ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း ဆိုင်းငံ့ထားရန်” အတည်ပြုခဲ့တယ် မဟုတ်ပါလား။
အဲဒီအချိန်တုန်းက စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေ ခေါင်းဆောင်တဲ့ ကြံ့ခိုင်ရေးဘက်တော်သားတွေရဲ့ ကိုယ့်ဖဲ ကိုယ်ချိုး ဒေါင်းပြပြီး ပြည်သူ့မေတ္တာ ခံယူသွားတဲ့ကိစ္စလို့ သုံးသပ်ဝေဖန်မှုတွေ ထွက်ခဲ့တယ် မဟုတ်ပါလား။ ထားတော့။
လက်ရှိ ကြံ့ခိုင်ရေးက တက်လာတဲ့ အစိုးရအဖွဲ့နဲ့ သူတို့အလိုကျ ခန့်ထားတဲ့ ၀န်ကြီးဌာနတွေရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ကို အဘ ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် စကားနဲ့ ပြောရရင်တော့ မယုံရေးချ မယုံပါ။ အခု ဖုန်းခွန်ကောက်မယ့်ကိစ္စကို လွှတ်တော်က ဆိုင်းငံ့ထားတာ မှန်ပေမယ့် NLD အစိုးရ တက်တက်လာခြင်း ကောက်မယ့်ကိစ္စကတော့ အချိန်ကိုက် လုပ်လိုက်လေသလားလို့တောင် မေးလိုက်ချင်ပါတယ်။ ထားချေတော့။
အခု NLD အစိုးရ တက်လာတော့မယ့်အချိန် ဒီပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်က သက်တမ်းပြည့်လို့ ဖုန်းကုန်သွယ်ခွန် ကောက်ဖို့ စပါတော့မယ်။ ပြည်သူ့အသံတွေလည်း ညံလာပြန်ပါပြီ။
တကယ်တမ်း ဖုန်းသုံးစွဲခ ငါးရာခိုင်နှုန်းကောက်ဖို့အတွက် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်က တစ်ဆင့် ဆိုင်းငံ့ထားဖို့ကိစ္စကလည်း ဧပြီလ ၁ ရက်ဆို စကောက်မှာဆိုတော့ အချိန်အကန့်အသတ်က ရှိနေပါပြီ။ ၀န်ကြီးဌာန အပြောင်းအလဲတွေ၊ အစိုးရဖွဲ့ရေးကိစ္စတွေ၊ အာဏာလွှဲပြောင်းရေး ကိစ္စတွေနဲ့ ဘေးကျပ်နံကျပ် ဖြစ်နေပါပြီ။ တကယ့်ကို “NLD အခက် ယုတ်သူတို့ အချက်” ဖြစ်လို့နေပါပြီ။ မပြေးသော်လည်း ကန်ရာ ရှိဆိုသလို NLD အစိုးရ တက်လာချိန်ကျမှ ကြိုတင်စီမံကိန်းချ အခွန်ကောက်မယ့်ကိစ္စဟာ သွေးရိုးသားရိုးတော့ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ခန့်မှန်းမိကြမှာပါ။ ပြည်သူတို့ လိုအပ်ချက်အရ မဖြစ်မနေ သုံးနေရတဲ့ ဖုန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံရေးကစားကွက် ဖန်တီးတာတွေကို ရပ်တန့်ဖို့ လိုအပ်နေပါပြီ။
နိုင်ငံသားတွေ အခွန်ဆောင်ရမယ်ဆိုတာ တာဝန်တစ်ရပ်ပါ။ ဒါပေမဲ့လည်း နှစ်ပေါင်း ၅၀ ကျော် နင်းပြားဖြစ်နေတဲ့ ပြည်သူ့ဆီက ဖုန်းခွန်ကောက်ယူဖို့ဆိုတာ လက်ရှိ အနေအထားတွေအရ အံ့ခွင်ဝင်ကျ မဖြစ်သေးပါဘူး။ အခွန်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြည်သူကို ပညာပေးဖို့ အချိန်အကန့်အသတ်ထား လုပ်ဆောင်ဖို့ လိုအပ်နေပါသေးတယ်။ ပြည်သူ့အိတ်ကပ်ထဲက ငွေကို အတင်းအကျပ် နှိုက်ယူမယ်ဆိုရင်တော့ မဖြစ်သင့်တာတွေကို ဖိတ်ခေါ်သလို ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။
ဒီတော့ အခုကိစ္စဟာ ရက်ပိုင်းအတွင်း တက်လာတော့မယ့် NLD အစိုးရအဖွဲ့နဲ့ NLD အမတ် အများဆုံး နေရာယူထားတဲ့ လွှတ်တော်အတွက် စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်နေတာမို့ စောင့်ကြည့်ရဦးမှာ ဖြစ်ပါကြောင်း။